Sirta ku qarsoon Sagaalka (9-ka) Wasiir. | Somali - Diaspora
Muxuu yahay qaabkan wax qeybsiga ee 50/50 ku saleysan? Tusaale in waqtigii i lagu heshiito sida 3-dii,4-tii ama 5-tii sano-ba qolo dalka hoggaamiso. Jagooyinka sarsare & Wasaaradaha muhiimka ahna la isugu dhufan doono sidan: Qoloba mar ayay hoggaanka ugu sarreeya qaban doontaa, halka qolada kale ay qaadan doonto Ra’isalwasaaraha Arrimaha Dibedda (woqooyi) vs Maaliyadda(koonfur). Gaashaandhigga vs Arrimaha gudaha (k). Caafimaadka(k) vs Waxbarashada (w). Qorsheynta vs dib u dhiska (k) iwm.
“Meeshii Cir laga sugaayaa Ceeryaamo ka timid!” Tiro Yar Mise Tub Toosan?! Warbixin ku saabsan sida wasiiro ku xigeenada iyo wasiiro dhowlayaasha ay beelaha u kala haleyaan.